Rebuilding.travel manendry an'i Aleksandra Gardasevic Slavuljica ho filoham-paritra ho an'ny Balkan
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rebuilding.travel manendry an'i Aleksandra Gardasevic Slavuljica ho filoham-paritra ho an'ny Balkan
Fanarenana.travel vao nanendry ny filoham-paritra voalohany. Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, MBA avy any Montenegro dia notendrena ho filoham-paritry ny fikambanana ho an'ny Faritra Balkan. Consul Honorary an'ny Seychelles any Montenegro izy.
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica dia fantatra ho mpitarika mafana fo, mitondra ary miasa mba hiantohana ny fahombiazan'ny orinasa rehetra. Manana traikefa be dia be izy amin'ny fanatanterahana karazana varotra, fifandraisan-davitra amin'ny orinasa, ary asa HR ao anatin'ny tontolo haingam-pandeha. Izy dia manana rakitsoratra zava-bita amin'ny famolavolana sy fitarihana ny fampielezan-kevitra amin'ny tsena marobe sy niche mihoatra ny 300 miaraka amin'ny tanjona mba hampitomboana ny fahafantarana ny marika, hisambotra tsena vaovao ary hanafainganana ny tombom-barotra.
Matetika i Alekasandra dia naneho ny fahaizana mitantana tsara ny fifandraisana amin'ny krizy izay tandindomin-doza ny lazan'ny orinasa. Nanolotra fifandraisana an-tserasera (IMC) ho an'ny vahaolana tsirairay izy.
Aleksandra dia manana traikefa tsara amin'ireto lafiny manaraka ireto:
Marketing amin'ny seranam-piaramanidina sy fifandraisana amin'ny orinasa (MARCOM)
Fandraisana vahiny MARCOM
Fitsaboana sy hatsaran-tarehy MARCOM
Fifandraisana serasera Marketing
Fampiroboroboana sy famonoana ny tsena Mass and Niche
Marketing nomerika sy media sosialy
Famantarana marika sy orinasa
Fikarohana sy fanadihadiana momba ny tsena
Fifandraisana amin'ny Agence Marketing, Creative & PR International
Fandaharam-pahefana sy fanatanterahana stratejika HR
Hafa: Fahaiza-mitarika, fampandrosoana ny orinasa iraisam-pirenena, fampitomboana ny vola miditra ary fanatsarana tombony, fitantanana tetikasa, famatsiana, fifampiraharahana amin'ny fifanarahana, raharaham-pitantanana, fanabeazana, ONG
Niasa tao amin'ny Montenegro Airlines izy, Crna Gora Airways, ny Governemanta Seychelles, ERA - European Regions Airlines Association, ary orinasa iraisam-pirenena maro hafa.
Amin'izao fotoana izao, manome i Aleksandra consultancy fitantanana ho an'ny Marketing AGS ny ankamaroany dia ho an'ireo mpiara-miasa iraisampirenena maro avy amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny mpampiasa vola.
Aleksandra dia manana mari-pahaizana Master sy bakalorea amin'ny fitantanana raharaham-barotra & marketing fitantanana ary HR. Miteny Anglisy, Montenegrin, Serba ary Kroaty izy, miaraka amin'ny fahalalana pasitika amin'ny teny italiana sy rosiana.
Juergen Steinmetz, mpanorina ny rebuilding.travel, dia nilaza hoe: “Tena faly izahay niara-niasa tamin'i Aleksandra tamin'ny fanatonana ny faritr'i Balkan manan-danja any Eropa. Faly izahay fa manana an'i Aleksandra ao anatin'ny sori-dalanay ho an'ny tanora. ”
Jereo ny profil Rebuilding.travel ho an'ny Aleksandra Gardasevic Slavujica.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fanarenana.làlana mankany amin'ny www.racing.travel.com
Grenada manao fomba fitandremana bebe kokoa amin'ny fanokafana indray ny sisin-tany
Fikambanan'ny matihanina amin'ny fivoriana LGBT dia mifidy seza vaovao amin'ny birao